Xiisadaha Burundi oo Gaaray in la Beegsado Suxufiyiinta – Radio Daljir
Oktoobar 15, 2015 1:46 b 0
Khamiis, Oktoobar 15, 2015 (Daljir) —Ugu yaraan toban qof oo ay ku jiraan filim-qaade u shaqeynayay telefishinka Qaranka dalka Burundi iyo laba carruur ah oo uu dhalay ayaa ku dhintay rabashado ka dhacay magaalada Bujumbura ee xarunta dalka Burundi, sida ay maanta sheegeen saraakiil ka tirsan xukuumadda Burundi.
Toogashadaan ayaa ka dhalatay hawlgallo ay booliiska Burundi ku doonayeen inay kusoo furtaan saraakiil la af-duubay, iyadoo filim-qaadaha la dilay loogu dhacay gurigiisa oo ku yaalla xaafadda Nagrara, lana toogtay isaga iyo laba cunug oo uu dhalay.
Goob-joogayaal iyaguna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in booliisku u dhaceen xarun ay ka raadinayeen saraakiisha la afduubay, iyagoo qof walba oo xarunta ku sugnaa ay si ula kac ah toogasho ugu dileen.
Saraakiisha booliiska Burundi ayaa sheegay in howlgalka ay ku dhinteen 10-qof oo uu ku jiray sarkaal dowladda ka tirsan, waxaana hawlgalka oo dhacay xalay uu saameyn xooggan ku yeeshay xaafadaha Bujumbura, iyadoo xalay oo dhan la maqlayay rasaas culus oo la is-dhaafsanayo.
Kooxo hubeysan ayaa gellinkii dambe ee shalay ka af-duubay xaafadda Ngarara shan ruux oo ay ku jireen saddex sarkaal oo booliiska ah, inkastoo aan illaa hadda la ogaan sababta ay dableydan afduubka u geysteen iyo koox ay ka tirsan yihiin.
Afhayeenka booliiska dalka Burundi, Pierre Nkurikiye ayaa saxaafadda u sheegay maanta oo Arbaco ah in howlgalkan lagu dilay shan ka mid ah kooxihii afduubka geystay, iyaguna ay dileen mid ka mid ah saraakiishii ay afduubeen.
Filim-qaadahan oo magaciisu ahaa, Christophe Nkezabahizi ayaa loogu dhacay gurigiisa, waxaana la toogtay isaga iyo laba carruur ah oo uu dhalay; sida ay sheegeen saraakiisha booliiska dalka Burundi.
Sidoo kale, goobjoogayaal ayaa xusay in toogashada wariyaha ay geysteen rag ku labisnaa dharka ciidammada Burundi, inkastoo aanay xukuumadda Bujumbura weli ka hadlin dilka wariyahan u shaqeynayay telefishinka Qaranka loo geystay.
Dhanka kale, Af-hayeenka booliiska dalka Burundi, Nkurikiye ayaa shaaciyay inay durba billaabeen baaritaanno la xiriira sida ay ku dhacday dhimashada wariyahan iyo laba ilmood oo uu dhalay.
Wararka ayaa intaas ku daray in xaafadda Jabe ee Bujumbura ayaa lagu dilay haweeney, kaddib markii bam lagu tuuray goob ay dad badan ku sugnaayeen; iyadoo sidoo kalena laga maqlayay qaraxyo iyo rasaas xooggan saddex xaafad oo ka tirsan caasimadda dalka Burundi.
Ugu dambeyn, in ka badan 130-qof ayaa ku dhintay rabashadaha Bujumbura ka socda tan iyo bishii Abriil ee sannadkan 2015-ka. Markaasoo uu ku dhawaaqay madaxweyne Pierre Nkurunziza inuu u tartamayo xafiiska markii saddexaad, taasoo ay mucaaradku kasoo hor-jeesteen.